Nezvedu - ALinks
Ruzivo rwakanaka runogona kuita kuti chiitiko chako chiwedzere kunakidza uye dzimwe nguva chinodzivirira kuti upinde mudambudziko rakakura.
ALinks iri webhusaiti nezvekugara kune dzimwe nyika uye kufamba kune wese. Yakagadzirwa munaJune 2019 neboka revazvipiri vekunze vanoshanda nevanotamira nevapoteri.
ALinks inoda kupa ruzivo rwakavimbika uye rwakajeka nezvekugara kunze kwenyika kune nhamba yakakura kwazvo yevanhu pasi rese. Tinoda kugoverana zvakaitika nevashanyi, vafambi, vadzidzi vepasirese, vabvakure, vanotama, vapoteri, uye chero ani zvake anongoda kuziva nezvekugara kunze kwenyika kana kuti kutambira nyika yavo kune vatorwa.
ALinks yakagadzirwa uye inotsigirwa neAsylum Links.
Asylum Links kubatana kwepasi rese kune vanoenda uye vapoteri vakanyoreswa muUK, England uye Wales Charitable Incorporate Sangano neCharity nhamba 1181234.
Dzokera kune yakakura peji